Shiva Basnet, Author at Living with ICT
Home / Shiva Basnet
Associate Editor- Living With ICT
केयुका विद्यार्थीहरुको आयोजनामा आइटी पार्कमा ‘आइटी मिट २०१८’ हुने
काठमाडौं युनिभर्सिटी कम्प्युटर क्लब (केयुसिसी)को आयोजनामा आगामी जनवरी ५ र ६ मा काभ्रेको आइटी पार्कमा आइटी मिट २०१८ हुने भएको छ । यसपटकको आइटी मिटको थिम ‘Discover । Develop । Deploy’ रहेको छ । यसपटकको इभेन्टमा विभिन्न आइटी कम्पनी, शैक्षिक संस्था तथा उपभोक्ताबीच अन्तक्रिया गरिने बताइएको छ । साथमा विभिन्न विश्वविद्यालयका कलेजका विद्यार्थीहरु, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवा, मिडिया एवं …
मनाङमा भारी हिमपात, मोवाइल नेटवर्कमा समस्या
हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपात सुरु भएको छ । मंगलबार बिहान देखि परेको हिमपात अझै रोकीएको छैन । हिमपातका कारण स्थानीयको जनजीवन भने सामान्य रहेको छ । जिल्लाका माथिल्ला भेगहरुमा अत्याधिक जाडो बढेको छ । माथिल्लो मनाङमा पर्ने नेस्याङ गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँमा हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन् । हिमपातले पर्यटक र सवारी आवागन भने प्रभावित भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र …
नेपाल टेलिकमले मुलुकका ग्रामीण तथा अति दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न नयाँ स्थानमा जिएसएम मोबाइल उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले मुलुकको अति विकट मुस्ताङको स्याङबोचे भ्यु प्वाइन्ट र दोलखाको डाँडाखर्कमा जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्याङबोचे भ्यु प्वाइन्टमा मंसिर १५ र डाँडाखर्कमा मंसिर ११ गते देखि सेवा सञ्चालनमा आएको हो । मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोमदेखि करिब ४० …
अवैध कलबाट ठगिदैं उपभोक्ता, प्रहरीमा दैनिक ४–५ वटा उजुरी
काठमाडौं, मंसिर १९ । पछिल्ला केही दिनयता भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएप लगायतका ओटिटी सेवाबाट नेपालमा अवैध कल आउने क्रम बढेको छ । नम्बर नै नदेखिने ‘अननाउन’, ‘नो कलर’ लगायत विदेशी मोबाइल नम्बरबाट नेपालका मोबाइल प्रयोगकर्ताको नम्बरमा फोन गरी धम्की दिने, फिरौती माग्ने, चिट्ठा परेको भन्दै झुटो प्रलोभन देखाएर रकम असुल्नेजस्ता आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको छ । विभिन्न विदेशी नम्बरहरुबाट कल …
Dec 4, 2017	0
पोखरामा ग्लोबल आइटी एजुकेशनले इथिकल ह्याकिङको कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दै ग्लाेबलले पछिल्लाे समय साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी गम्भीर इस्युहरू अाइरहेकाे र इथिकल ह्याकिङमा विद्यार्थी र युवाकाे चासाे बढेकाले पाेखरामै व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न लागेकाे जानकारी दियाे । साइबर सेक्युरिटीका विज्ञ एवं इथिकल ह्याकर नरेश लामगादेले तालिममा प्रशिक्षण दिने छन् । यही पुस २ गतेदेखि १० दिनसम्म तालिम …
सगुनको सेयर खरिद गर्ने समय ३ दिन थप
सामाजिक सञ्जाल सगुनले खुल्ला गरेको शेयर विक्री अवधि थप ७२ घण्टा थप गरेको छ । न्यूयोर्क समय अनुसार डिसेम्बर ३ तारिखसम्म थप गरिएको सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले जानकारी दिएका छन् । सगुनमा शेयर लगानीका लागि विश्वभरबाट उत्साहजनक सहभागिता जुटेको उनको भनाई छ । लगानी गर्ने म्याद गुज्रिनै लाग्दा विश्वभरबाट अत्याधिक संख्यामा लगानीकर्ताहरु शेयर खरिदको प्रकृयामा आएको उनले बताए । लगानीको लागि बिश्वभरबाट www.sagoon.com/invest मा …
नेपालको अबको आवश्यकता ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ र ‘यु–लर्निङ’ हो
डा. मनिश पोखरेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका एशोसिएट प्रोफेसर हुन् । ई–गभर्नेन्स र क्लाउड कम्प्युटिङ विषयमा विद्यावारिधी हासिल गरेका पोखरेल २० वर्षदेखि प्राध्यापन पेशामा छन् । सूचना प्रविधि विज्ञकाे रूपमा परिचित डा. पाेखरेल पछिल्लाे समय स्मार्ट सिटी निर्माण अभियानमा लागिपरेका छन् । उनीसँग सूचना सञ्चार प्रविधि क्षेत्रकाे समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छाैं : नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासक्रमलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ? …
नेपाल टेलिकमले माइक्रोवेभ प्रविधिमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा विस्तार गर्दै
नेपाल टेलिकमले विभिन्न जिल्लामा भिस्याट प्रविधिमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा हाल माइक्रोवेभ प्रविधिमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कतिपय नयाँ स्थानमा समेत यो प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । हालै पूर्वाञ्चलका सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, मोरङ, झापा, सप्तरी र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बिटिएस स्थापना गरी माइक्रोवेभ प्रविधिमार्फत जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिएको छ । पुरानो प्रविधिमा …
आजको जमानामा वेबसाइट अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । सामान्य व्यक्तिदेखि व्यवसायिक संगठन सबैले आफ्नो वेबसाइटलाई दैनिकीसँग जोडिरहेका छन् । अब हरेक बिजनेश सफल बनाउन अनलाइन जानैपर्ने र अनलाइनबाटै आइडिया वा बिजनेशकाे मार्केटिङ गर्न जरुरी भइसकेको छ । विश्वभरका लिडिंङ वेबसाइट निर्माण गर्ने सेवाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यका साथ कन्टेन्ट्डर (Contentder) नामक कम्पनीको स्थापना भएको छ । अस्ट्रेलियामा दर्ता भएको यो नेपाली …